Ifumaneka ngokufanelekileyo ukufutshane, ukuhamba ngokulula ukusuka kwisikhululo sikaloliwe saseLa Spezia Centrale, eli gumbi liqaqambileyo, ligcwele ukukhanya linegumbi elinye 'likhaya elikude nekhaya' ngelixa undwendwela iCinque Terre. I-La Spezia imfutshane nje, i-8 yemizuzu yohambo lukaloliwe ukusuka kwidolophu yokuqala kwiidolophu ezintlanu kunye nemizuzu engama-25 ukusuka kokugqibela (okanye i-15 min express).
UKUGCINWA KOMTHETHO KUBANDISWA KWIXabiso. Iindwendwe zingasebenzisa ivenkile ezimeleyo yemithwalo ukusuka eflethini phambi kokungena okanye emva kokuphuma.
4.89 ·Izimvo eziyi-126
4.89 · Izimvo eziyi-126
IChic & Cozy ibekwe ngokugqibeleleyo kufutshane nesikhululo sikaloliwe saseLa Spezia Centrale. Kufuphi neendawo zabahambi ngeenyawo apho kulula ukukhangela iindawo zokutyela ezilungileyo kunye nokuthenga.
Ndibulisa ngokobuqu zonke iindwendwe kwaye ndiyabamkela eflethini. NDILUNGELE UKUHLANGABEZANA neendwendwe kwisikhululo sikaloliwe saseLa Spezia kwaye ndikhaphe ukuya kwi-APPARTMENT. Ndiza kubonelela ngeemephu kunye nokunika ulwazi malunga nommandla kunye neengcebiso zeendawo zokutyela njl. Ndingaqhagamshelwa nangaliphi na ixesha kwaye ndonwabile ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo ngexesha lokuhlala kwakho.
Ndibulisa ngokobuqu zonke iindwendwe kwaye ndiyabamkela eflethini. NDILUNGELE UKUHLANGABEZANA neendwendwe kwisikhululo sikaloliwe saseLa Spezia kwaye ndikhaphe ukuya kwi-APPARTMENT…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- La Spezia